Hondo Marobhoti chiito uye mutambo wekupfura | IPhone nhau
Tinodzoka kuzotarisa iOS App Store tichitsvaga zvinhu zvinonakidza, kunyanya izvozvi, uye ndezvekuti Kisimusi inotibatsira kuti tiwane imwe nguva yekusununguka, uye nekudaro, tinoda zvimwe zvekuvaraidza. Nhasi tinokuunzira mutambo wekuti upfuure nguva uye kudzikamisa tsinga dzeEvha yeGore Idzva kudya kwemanheru apo mukuwasha wako achipa zvidzidzo mune zvehupfumi zvemumba, tinokupa iwe Hondo Zvemabhatiri, mutambo uyo unobvumidza iwe kurega hutsi nepfuti shoma, nyore kushandisa uye ine yakapusa tema. Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti yakasununguka zvachose (ine mubhadharo wakabatanidzwa) uye inoenderana nenyaya dzese munzvimbo yeApple.
Aya ndiwo maratidziro ePixonic kwatiri, yako yekuvandudza kambani:
Hondo Zvemabhatoti ndeye chiito-chakazara-mutambo wevazhinji mutambo neiyo chaiyo-nguva 6v6 timu kurwa. Joinha iwo mazita evarwi vesimbi!
Iyi ihondo, mutyairi wendege! Wakagadzirira kurwiswa kushamisika, akajeka maitiro eanogadzira uye Machiavellian stratagems iyo vako vanokwikwidza vari kugadzirira? Paradza marobhoti emuvengi, tora mabhekoni ese uye uvandudze zvombo zvako kuti uwedzere simba rekurwa, kumhanyisa uye kutsungirira kwerobhoti rako rehondo. Zvipikise pamepu imwe neimwe uye shandisa mazano akasiyana nematekiniki kuhwina hondo dzese!
Tinogona kudzora makumi maviri nemana marobhoti ane anopfuura makumi maviri marudzi ezvombo. Iyo yemagariro chinhu inoenderanawo, saka tinogona kugadzira mhuri uye kurwisa vanokwikwidza. Vakwikwidzi vanobva kumativi ese epasi vachange vakamirira isu mune yavo yakawanda nzira. Kune rimwe divi, ine chishandiso cheApple Watch uye inoenderana neiyo iPad. Inorema 24MB, izvo zvisina kushata zvemutambo une hunhu uhu. Tyakadudzirwa mumitauro isingaverengeke, zvakare ine zvinhu zvisingaverengeki zvakabatanidzwa, asi zviri kune mumwe nemumwe mushandisi kuziva kana zvakakodzera kutenga kwavo kana kwete.
Hondo Marobhoti. Multiplayer PvPvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » War Zvemabhatiri chiito shooter mutambo uyo achakuchengeta kuvaraidzwa
Hongu izvo zviripo.
Ndatonyora chirevo katatu uye hachina kuburitswa. Panguva ino kana iko kushanda kuripo.